JAN. Odowaa oo maanta la wareegay xilka Taliyaha ciidamada Xoogga dalka – Maanta Online
Munaasabad ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen Wasiirka Gaashaandhigga, saraakiisha ciidamada Milateriga Soomaaliya, saraakiil ka socotay dowladaha taageera iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadaan oo ay xilka ku kala wareegayeen Taliyihii hore iyo taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay ciidamada xoogga dalka Jan. Daahir Aadan Cilmi (Indhaqarshe) iyo Taliyaha cusub Jan. Odowaa Yuusuf Raage, kuwaasi oo iyagu halkaasi ka jeediyay khudbado ku saabsan arrimaha ciidamada.
Taliyihii hore ee ciidamada Xoogga dalka ayaa isagu xilka ku wareejiyay taliyaha cusub, wuxuuna sheegay in loo magacaabay sarkaal si gaar ah u garanaya baahiyaha ciidamada, isla markaana yaqaanna sidii loo horumarin lahaa tayada ciidanka.
“Odowaa waxaan ku soo dhowo, meel aad taqaanid baad timid” ayuu yiri Jan. Indhaqarshe oo sheegay inuu uga mahad celinayo madaxda sare ee Dowladda Federaalka iyo cidii soo magacowdayba.
Taliyaha cusub ee ciidamada Xoogga dalka Jan. Odowaa Yuusuf Raage ayaa isna halkaasi ka jeediyay khudbad gaaban, isagoona sheegay inay ka go’an tahay sidii uu dadaal xoogan ugu geli lahaa dishibiliinka ciidamada iyo in dalka laga xoreeyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu sheegay inay dadka u diidan yihiin nabadda iyo nolosha.
← AKHRISO: Ahlu-Sunna oo ku dhowaaqday inuu buray heshiiskii DF, kuna baaqday is difaac
Taliska AFRICOM oo beeniyay inuu duqeyn ka fuliyay gobolada Jubbooyinka →
Ciidamo xarunta gobolka Banaadir 3 ka tirsan shaqaalaha xaruntaasi (Waa maxay sababta?)